Fisainana mampahonena | Pakysse
Archive for the ‘Fisainana mampahonena’ Category
Tranobe mijoalajoala an’i Mamy Ravatomanga etsy Ambohibao, mampitsiriritra ny mahantra
avril 29, 2014 in 2014, Ady Hevitra, Andry Rajoelina mafia, Fahakiviana, Fahantrana, Fanapareham-pahefana, Fandraisana andraikitra, Fanehoana hevitra, Fangalarana ny volam-panjakana, Fiainam-pirenena, Fisainana mampahonena, Hazo sarobidy, Hery Rajaonarimampianina, Internautes, internet, journalisme citoyen, Journaliste citoyen, Kolikoly avo lenta, Madagasikara, Mafia malagasy, Malagasy, Mamy Ravatomanga, Mpanao politika, nTIC, Politika, Quatrième république, Revolution web2.0, Samihafa, T4D-M4D, Toe-tsaina mila miova, Tontolon'ny internet, Vahoaka misy saina ny malagasy, Web 2.0, Zon'olombelona
Eny amin’ny farihin’Ambohibao (lac Ambohibao) no misy ity tranobe manarapenitra ity. Nandritra ny fitondrana tetezamita no nipoiran’izy io.
Mahantra sy sahirana tanteraka ny vahoaka malagasy. Nefa, ny tany midadasika, ny harena an-kibon’ny tany, an-dranomasina, an-tanety ary an-hanabakabaka mirarakopana misy eto amin’ity Nosy malalantsika ity, dia tsy manampaharoa. Ny firaisankinan’ny rehetra, eo amin’ny fitadiavana ny rariny sy ny hitsiny dia tokony atao soa iombonana, ho an’ireo taranaka Fara sy Dimby.
Aiza ho aiza ny tohin’ilay tantara Ravatomanga manoloana ny fitsarana?
Raha ny tsiliantsofina dia milamina tsy misy olana ny afera maloton’n’ingahy Mamy manoloana ny fitsarana ankehitriny. Notabatabaina, ho re tany, ho ren-danitra manerana izao tontolo izao fa hitondra fiovana ingahy « comptable » ( Hery Rajaonarimampianina). Izany hono ny antony, nampiakarana an’i Ravatomanga teny amin’ny fitsarana. Ka, mody nanaovana ireny sarin’ady ireny, mba hanadiovana an’i prezidà, fa mandray andraikitra tokoa ity farany.
Ny fiheverana ny malagasy ho donto sy tsy misy saina dia mampiomehy tokoa. Matetika nefa, ny mpanao politika sy ny mpanao afera maloto teto amin’ity firenena ity dia afabela foana. Ka izay indrindra no tsy tokony hanekena ireo tsy maty manota. Isan’izany, ity afera mitana ny sain’ny maro ity!
Halako bika tsy tiako tarehy
Tsy ny fanaovana « halako bika tsy tiako tarehy » ny tanjona eto. Ny fanairana ny saina sy ny fitaterana manarapenitra ny zava-misy eto an-Tanindrazana no tena tiana hasongadina. Nandritra ny fitondrana tetezamita mantsy, tsy nisy olona tsy niaiky fa dia mpanakarena ary olona tsy azo natao na inona na inona izany Mamy Ravatomanga izany.
Amin’izao ora sy fotoana hanoratana izao, maro ireo olom-pirenena tsotra, no miandry ny tohin’ilay tantara fanondranana Andramena? Mangony fotsiny, ny aferan’i SODIATRANS izay notaterin’i Zakariasy Patrick.
Ny teny famaranana tompokolahy sy tompokovavy, mikasika an’ity deba be ity dia tsotra. Ny mpitsara malagasy, tia kolikoly dia tokony manatsahatra ny fanaovana mazia, mazia eo amin’ny tontolon’ny Tribonaly. Satria, olona manana hazon-damosina sy misy saina raha ny fahafantarana azy ireo. Izany hoe, ilay fahazarana mamoaka didy: « Afaka nohon’ny fisalasalana » dia mila havadika « fanagadrana nohon’ny porofo mivaingana ».
Tokony samborina, atao fanadihadiana i Andry Rajoelina
mars 14, 2014 in 2014, Ady Hevitra, Andry Rajoelina mafia, Bois précieux de Madagascar, Dahalo, Fahantrana, Fanajana ny zavaboary, Fanapareham-pahefana, Fandraisana andraikitra, Fanehoana hevitra, Fangalarana ny volam-panjakana, Fiovaovan'ny tontolo iainana, Fisainana mampahonena, Fomba Fisainana Mivelatra, Hazo sarobidy, Internautes, internet, journalisme citoyen, Journaliste citoyen, justice, Kolikoly avo lenta, Madagasikara, Malagasy, Mamy Ravatomanga, Mpanao politika, nTIC, Olom-pirenena, Politique, Revolution web2.0, Samihafa, T4D-M4D, Toe-tsaina mila miova, Tontolon'ny internet, Vahoaka misy saina ny malagasy, Web 2.0, Zon'olombelona
Raha ny lojika politika misy ankehitriny dia tsy tokony menatra, mihemotra na matahotra i Hery Rajaonarimampianina sy ny ekipany, amin’ny fisamborana an’i Andry Rajoelina. Satria, ny mitady ny soa ny mpiarabelona sy ny firenena dia efa nataon’izy ireo vaindohan-draharaha.
Andry Rajoelina lehiben’ny MAFIA Malagasy
Ity oronan-tsary ity dia manazava tsara ny fomba maloto tamin’ny famotehana sy ny fanondranana ny harem-pirenena malagasy. Voatonona ao ny anaran’i Andry Rajoelina. Izay azo lazaina fa lehiben’ny MAFIA malagasy nandritra iny fitondrana tetezamita iny.
Maninona moa tsy Tonga dia ingahy mpikiky kapila manjelatra no samborina? Sa i Mamy Ravatomanga no tena mpilalao ny « télécommande » ka ingahy kely dia sarobakolin’ity farany?
Famonoana olona manarapenitra, niarahana tamin’i Andry Rajoelina ny 26 Janoary sy ny 07 febroary 2009
Raha ny maso mahita, ny saina mandinika dia i Andry Rajoelina no lehiben’ny mpamono olona, nandritra ilay revolision’ny mpanongam-panjakana, ny taona 2009 iny.
Ny tena nahatalanjona ity tantara ity dia ny tsy fandraisana andraikitra nataon’ i Rajoelina. Raha ny lojika mantsy, rehefa mitarika tolona na revolisionina ny olona Iray. Ny lehibe (leader) dia tsy maintsy mampiseho fihetsika fa tsy matahotra ary mahasahy hatramin’ny farany, hatramin’ny fahafatesana.
Nefa, mody nitomany tahaka ireny zaza nosarahana nono ireny ingahy Dijaka ny ampitson’ny 07 Febroary. Ny mahagaga ihany koa, ny 26 Janoary dia tsy nanao izany lery. Inona ny antony sa filalaovana sarimihetsika fotsiny iny ranomaso mody nalatsaka iny? Ny fanontaniana mipetraka ihany koa dia ity: inona ny maha samihafa ireo olona Maty ny 26 Janoary 2009 mihoatra ireo olona Maty ny 07 Febroary 2009? Maninona i Rajoelina tia milalao faty ary maninona ingahy io no tia mandainga?